Manameloka ny fikasan-dratsy ny kardinaly Tsarahazana: “Tsy manao politika ny fiangonana Katolika” | NewsMada
Par Taratra sur 30/07/2021
Mihazakazaka ny raharam-pirenena. Nivory tsy ara-potoana ny eo anivon’ny Fivondronamben’ny eveka (Fem), omaly . Noraisin’ny filoha Rajoelina Andry teny Iavoloha izy ireo taorian’izany. Nambaran’ny kardinaly Tsarahazana Desiré tamin’izany fa tsy miditra resaka politika ny fiangonana katolika.
Nanao fanambarana amin’ny fitsipahana marindrano ny fikasana fifofoana aina sy ny fanakorontanana ny Fem, omaly, niainga amin’ny toromariky ny any Vatikana. Nahitsy ny kardinaly Tsarahazana Desiré tamin’izany. “Tsy manao politika ny eveka sy ny pretra. Tsy fanaonay ny mitady seza na toerana… Manohitra tanteraka ny herisetra ahazoana fitondrana ary tsy mankasitraka ny fanakorontana isan-karazany ny fiangonana katolika”, hoy izy. Nohitsiny fa manameloka amin’ny heriny rehetra ny tetika hakana fahefana amin’ny alalan’ny herisetra. “Tsy manao politika ary tsy manana olona hatolotra ho praiminisitra ny fiangonana katolika”, hoy izy. Nanteriny fa tsy miaraka ary tsy miditra amin’izany ny fiangonana. Anjaran’ny eglizy ny miezaka miteny sy mananatra ary mankahery. “Miteny rehefa misy ny tsy mety fa tsy hoe manana kandidà atsy na aroa izahay. Tsy manao izany ny eo anivon’ny fiangonana katolika”, hoy ihany izy.
Olan’ny vidim-piainana, ny kolikoly…
Anisan’ny votoatin’ny fivoriana tsy ara-potoana nataon’ny Fem ny tsy fandriampahalemana sy ny fihanaky ny kolikoly ary koa ity “Raharaha fifofoana ny ain’ny filoha” ity. Manampy izany ny hijerena ny vidim-piainana, ny fanamboarana-dalana, indrindra ny RN2.
Nankasitraka ny fankaherezana nataon’ireo eveka manoloana iny tranga iny ny filoha Rajoelina Andry. Notsindriny fa tsy azo ekena ny fihetsika mamoafady kasain’ny sasany hatao eto amin’ny firenena. “Tsy azo ekena ny fampiasana herisetra. Manana ny soatoavina ny Malagasy”, hoy izy. Nisaotra ireo rehetra nankahery sy nitondra am-bavaka amin’izao toe-draharaha izao ny filoha. Mbola betsaka ny tokony hatao sy harenina eto amin’ny firenena, araka ny nambarany hatrany.
Nohenoina ora maromaro ny Mgr Razanakolona Odon
Tsiahivina fa nohenoina nandritra ny ora efatra teo ny arsevekan’Antananarivo, ny Mgr Razanakolona Odon, omaly, teny Andohalo, araka ny vaovao navoakan’ny “Depeche informative Taratra”. Momba ny mety ho fifandraisany na tsia amin’ny « Raharaha Apollo 21 » ny antony. Nitarika ny fanadihadiana ny Tonia mpampanoa lalàna ambony (PGCA) sy ny eo anivon’ny mpitandro filaminana. “Mbola ao anatin’ny tsiambaratelon’ny fanadihadiana sy ny famotorana izao ka tsy afaka miteny izahay. Mbola hisy ny fanambarana hataonay”, hoy ny mpisolovava ny arseveka, taorian’ny fihainoana azy. Voatonontonona ho nifandray tamin’ilay teratany malagasy mizaka ny zom-pirenena frantsay, anisan’ny atidoha nikotrika ny fifofoana ny ain’ny filoha « Raharaha Apollo 21 » ity oloben’ny fiangonana katolika ity ka antony nihainoana azy izany.